रोहित पुनको हत्याको विरोधमा अनिश्चितकाली बन्द हुने पुनमगरलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग – रोल्पा समाचार
२०७५ भाद्र २५, सोमबार ०९:५३ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७५ भाद्र २५, सोमबार ०९:५३ गते
रोल्पाको सुलिचौरमा गोली हानेर मृत्यु भएका २९ वर्षिय रोहित पुनमगरको हत्याको विरोधमा आज रोल्पा जिल्ला बन्द भएको छ । रोल्पा रोल्पा न.पा. १० धबाङका देबबहादुर घर्तीमगरले प्रहार गरेको गोलीबाट पुनमगरको मृत्यु भएपछि विरोध स्वरुप नेपाल तरुणदलले आज बन्दको आयोजना गरेको हो । बन्द सरकारले घटनाका आरोपितहरुलाई लिएर सार्वजनिक नगर्दा सम्म बन्द अनिश्चित हुने समेत नेपाल तरुणदल रोल्पालेब ताएको छ ।
कोणसभामा बोल्दै पूर्व साँसद नेपाली लेखनाथ आचार्यले हत्याकारलाई कारवाहीको काम गर्नुभएको छ । यस्तै निवर्तमान सभापति कृष्णबहदाुर घर्तीमगरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखले ध्यान दिएर छिटा नियन्त्रणमा लिनका लागि अनुरोध गर्नुभयो । यस्तै आरोपितहरु नेपाल तरुणदलका अध्यक्ष जितविक्रम मल्लले सरकारकै संरक्षणमा रहेको समेत दावी गर्नुभयो । यस्तै नेविसंघ रोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर थापाले फकाई फकाई गोली हानी हत्या गरिएको दावी गर्दै तुरुन्त सरकाले कारवाही गर्नका लागि अुरोध गर्दै पुनलाई शहीद घोणा को माग गर्नुभएको छ ।
यस्तै नेपाल महिला संघ रोल्पाका अध्यक्ष पुष्षा श्रेष्ठले स्वर्गीय रोहित पुनमगरलाई शहीद घोषणा र हत्याराहरुलाई कारवाहीको काम गर्नुभएको छ ।
आज दिनभरी भएको बन्द भएपछि रोल्पाबाट बाहिर जाने र आउने यातायाताका सवारी साधन, बजार सबै बन्द भएका छन् रोल्पा जिल्लाका घर्तीगाउँ, सुलिचौर, होलेरी थबाङ लगायतका सबै बजारहरु बन्द भएका छन् । तरुण दल नेपाल जिल्ला कार्यसमितिले आज ५ बजेबाट मात्रै बन्द खुल्ने जानकारी दिएपनि अनिश्चतकालीन बन्द गरिने आयोजकले बताएको छ । लिबाङबजार परिक्रम गर्दा ¥यालीमा सहभागिहरुले रोहित पुनमगरलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, हत्यारालाई कारवाही गर्नुपर्ने लगायतका नाराहरु लगाएका थिए ।
करिव ५ बजेतिर गरेको ३ राउण्डको गोलीबाट करिव २९ वर्षिय रोहीत पुनमगरको मृत्यु भएको हो । सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नं. ४ सुलिचौरमा रहेको रेशप्वाइन्ट होटेलमा दुवैे जनारहेका बेलामा विगतदेखिको केही मनमुताव भएपछि होटेलमै गोली हानी हत्या गरेका हुन सक्ने प्रहरी श्रोतले बताएको छ ।
गोली लागेर मृत्यु हुने रोहित पुनमगर नेपाल तरुणदलका रोल्पा नगर अध्यक्ष समेत रहेका छन् । रोहितपुनमगर केही दिनको भ्रमणपछि सुलिचौरमा आएको र देवबहादुर पनि त्यही सुलिचौरमा भएको बेलामा झडव भएको हो । कि गोली हानेको भन्ने प्रारम्भिक बयानमा देवले आफूलाई केही समूहले आक्रमण गरेको र आफूले प्रतिरक्षाका लागि गोली हानेको मात्रै बयान दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले बताएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी प्रमुख दिपक खड्काले केही समयपछि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी घटनाको सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रमुखले सुरक्षा समितिको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिने बताउनुभयो । उहाँले कानून अनुसार अगाडि बढीनेसमेत बताउनुभो । पुनको शव जिल्ला अस्पताल रेउघामा रहेको छ ।
अनिश्चितकाली बन्दले रोल्पा जिल्लाका जनजीवन निकै प्रभावति हुने सम्भावना रहेको छ । त्यसैले सरोकारवालाहरु बसेर यस विषयमा गम्भिररुपमा छलफल गरी सामाधान खोज्न आवश्यक देखिन्छ ।